MDC Inonyora Tsamba yeNyunyuto kuJOMIC
Kukadzi 09, 2010
Bato reMDC inotungamirirwa naVaMorgan Tsvangirai rinoti rakanyora tsamba kukomiti yeJOMIC richinyunyuta nemabatirwo arinoti ari kuitwa nhengo dzaro nemapurisa.
Bato iri rinoti mumwedzi waNdira, nhengo dzaro dzinodarika makumi mashanu, kusanganisira mumiriri weMabvuku/Tafara mudare reparamende, VaShepherd Madamombe, dzakasungwa nemapurisa pasi pemutemo wePOSA.
Bato iri rinoti nhengo idzi dzakasungwa mushure mekunge dzasangana dzichikurukura dziri mudzimba nepamahofisi ebato iri.
Mukuru anoona nezvekufambiswa kwemashoko muJOMIC, VaJoram Nyathi, vabvuma kuti sachigaro weJOMIC mumwedzi uno, VaWelshman Ncube, vakatambira tsamba yakanyorwa neMDC, asi vanoti sangano ravo richiri kuongorora nezvenyaya iyi.
Munyori anoona nezvemutemo muMDC, VaInnocent Gonese, vanoti pasi pemutemo wePOSA wakavandudzwa mugore ra2008, mapato ezvematongerwo enyika haachasungirwa kukumbira mvumo kubva kumapurisa kuti aite misangano yawo.